को हुन् यी ब्यक्ति जसले १० बज्दासम्म वडा अध्यक्ष नआएको भन्दै वडा कार्यालय नै सिध्याईदिए ? | समाचार
September 22, 2021 NepstokLeaveaComment on को हुन् यी ब्यक्ति जसले १० बज्दासम्म वडा अध्यक्ष नआएको भन्दै वडा कार्यालय नै सिध्याईदिए ?
असोज । सुर्खेतको एक वडा कार्यालयमा पे’ट्रो’ल छ’र्के’र आ’गजनी गरिएको छ । कार्यालयमा वडाध्यक्ष नभेटेको झोकमा एक युवकले पेट्रोल छर्केर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष गंगाराम सुनारको कार्यकक्षमा बुधबार विहान आ’ग’जनी गरेका हुन् ।
वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा आ’ग’ज’नी गर्ने स्थानीय वास्ताम लामिछाने रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आ’ग’जनी’बाट कार्यालयका कुर्सी, सोफा, दराज र त्यहाँ रहेका सबै कागजातहरु जलेर नष्ट भएको वडाध्यक्ष सुनारले जानकारी दिए । बुधार बिहान ८ बजे नै एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आफू राजधानी आएको समयमा आ’गजनी भएको उनले बताए ।
वडाध्यक्ष सुनारले भने, ‘करिब १०ः०४ बजेतिर वडा कार्यालयकै ल्याण्डलाइनबाट फोन आयो । मैले फोन रिसिभ गरें । फोन रिसिभ हुने बित्तिकै तपाईं कार्यकक्षमा आउनु पर्दैन भन्दै ती युवक कडकिए ? डुलिडुली खाने ? भनेर ध’म्की दि’न थाले । मैले केही काम परे कार्यवाहक अध्यक्ष आउनु हुन्छ, बस्दै गर्नुस् न, यदि हतार नै हो भने यही होटेलमै आउनुस् भनेर फोन राखें ।’
वडाध्यक्ष सुनारले अगाडि भने, ‘उनले फेरि फोन गरे, तपाईं आउनुहुन्छ कि तपाईंको कार्यालय जलाई दिम ? भनेर ध’म्की दिए र फोन काटे । त्यसलगतै मैले वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर उनको काम गरिदिन भने । त्यसको १० मिनेटपछि त वडा कार्यालयमा आ’ग’जनी भएको खबर आयो । तिनै व्यक्तिले कार्यकक्षमा पसेर पे’ट्रो’ल छ’र्के’र आ’गो ल’गाई दिएछन् ।’
प्रहरीले लामिछानेलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । आफू पनि घटनास्थलमै भएको र लामिछानेको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले जानकारी दिए । घटननाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले लगायतको टोलीले वडा कार्यालयको निरीक्षण समेत गरेका छन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनेपछि हजुरआमा बनेकी रबिनाले यसो भनेपछी सबै छक्क परे !